Ixtiraam ma Jirro Miyaa? | allsanaag
Ixtiraam ma Jirro Miyaa?
Maamulka Hargeeysa iyo ganacsatadooda kuwa wax shaqaaleeysiiya ayaa si xun ulla dhaqma dadka laxaadkooda aysan dhammeen. Sulleemaan oo ah wiil naafa ah, laakiin qaban kara shaqooyin badan ayaa sheegay inuu heeysto 12 shahaado, balse uu waayey cid shaqo siisa.
Marka uu taggo wasaaradaha Sulleemaan waxaa loo sheegaa inuu yahay qof curiyaan ah oo aan shaqeeysan karin, qaar waxeey ku yiraahdaan adigu dadka derbi jiifka ah soo raac, meesha qaarna ay yiraahdaan gaariga xaqal baska ah ka bixiya. Sidoo kalle, Sulleeymaan waxaa laga reebay waxbarashada ardeyda loo dirayey dibedda, isagoo loo sheegay in qof dhameeystiran uu fursada ka qasaarinayo maadaama isagu uu yahay qof curyaan ah.
Haddii maanta ay dawladdii Kacaanka dalka ka tallin laheed, Sulleeymaan iyo dadka kalle ee la midka ah kama welweleen shaqo, balse dadkii oo dhan waxaa noloshoodii burburiyey qooleeysato maafiya ah oo la baxay SNM. Sulleeymaana waxaa habboon inuu isaga taggo Hargyeesa uuna aado Puntland ama Muqdisho si maskaxdiisa uu u badbaadsado.
← Wixii Dhinta Iyagaa Mas’uul ka ah Gaas oo maanta kulan la qaatay guddiga khilaafaadka →